Artist | RADIO AUDIO YES! MAI CHA MAJJA
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:23:47
सब्जी वा तरकारी बिना हाम्रो दैनीक भोजन सार्थक हुँदैन । तरकारी बिनाको खाना कल्पना बाहिरको कुरा हो । त्यसैले सब्जीको महत्व व्यापक छ । स्वादका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि यसले धेरै फाइदा गर्छ । खाना भन्दा बढी सब्जी खान चिकित्सकको सुझाव हुन्छ ।... यी हुन् साइतमा नराम्रो असर पार्ने ७ कुरा
काठमाडौं, यदि तपाई कुनै कामका लागि घरबाट निस्केर कहिँ जाने तरखरमा हुनुहुन्छ भने निम्न कुराहरुख्याल गर्नुहोस् किनकी यी कुराहरु तपाईंको यात्राको प्रारम्भमा देखिए भने तपाईंले चाहेको काम नहुन सक्छ । त्यसैले यस्ता अवस्थामा यात्रा प्रारम्भ रोक्नुहोस्... यीनै ७ कारण जसले तपाईंको सम्बन्धलाई टाढा टाढा बनाउँदै लैजान सक्छन् ।
काठमाडौं । केही समय पहिले इन्डियना यूनिवर्सिकटीमा भएको एक रिसर्चमा पाएइएको छकि धोका दिने मामलामा महिला पुरुष भन्दा कम छैनन् । जति मानिसमा यो सर्भे गरीयो उनमा २३ प्रतिशत पुरुषले आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिएको कुरा स्वीकार गरे भने १९ प्रतिशत महिलाले ... किन छोराछोरीको बाउ बन्न सकेनन् दिलिप कुमार ? के छ कारण ?
बलिउडमा ट्रेजडी किँगका नामले चर्चित दिलीपकुमारको कुनै सन्तान छैनन् । यो कुरा सबलाई थाहा छ । तर कम मानिस लाई मात्र यो कुरा थाहा छ । यो कुरा उनले आफ्नो अटो ग्राफ द सबस्टांस एण्ड द शैडो मा दिएका छन् । त्यसमा उनले लेखेका छन् । सा... काजोलले किन गरीन् कृतीको रिस ?
सिने क्षेत्रमा प्रतिष्ठा लडाईँ व्यापक देखिन्छ । चर्चामा आउने प्रतिष्पर्धा पनि उत्तिकै हुन्छ । यो लडाईँ र प्रतिष्पर्धाले मानीसमा रिस, डाह उत्पन्न गराउँछ । जसकारण एकै स्तरका कलाकार एक अर्काको रिस गर्छन् । कसैले रिस देखाउँछन्, कसैले र... दिलवालेको २००० करोड कमाउने क्षमता छ - शाहरुख खान ।
मसंीर २९, काठमाण्डौ ।
बलिउड सिनेमा दिलवालेको टिम अहिले प्रमोशनमा नै व्यस्त छ । सिनेमा रिलिज हुनको लागी अब धेरै दिन नरहेको सिनेमा दिलवालेमा काजोल ,शाहरुख खान,वरुण धवन,कृती सेनोन लिड रोलमा छन् । सिनेमाको टे«लर गितहरुले पाएको चर्... सन् २०१५ मा विवाह गर्ने बलिउड सेलिब्रेटीहरु
हरेक मानीसको विवाह विशेष हुन्छ । उसले जिन्दगीभर चाहेर वा नचाहेरै पनि सम्झीरहन्छ । आम मानीसको दाँजोमा सेलिब्रेटीको विवाह सम्झने फ्यान धेरै हुन्छन् । कतिपय फ्यानको लागि सेलिब्रेटीको विवाह सुखको खबर होला । त्यसैले जीवनभर सम्झीरहन्छन् । कतिपय फ्यानका लाग... रितेश फेरि पिता बन्दै , गर्भवती भईन् जेनेलिया ।
मंसीर २४, काठमाण्डौ ।
२८ बर्षिय अभिनेत्री जेनलिया डिसुजा फेरि गर्भवती भएकी छिन् । २०१४ मा एक छोरालाई जन्म दिएकी जेनेलिया, फेरि गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । गत २४ नोभोम्बरमा जेनलियाले, आफ्नो पहिलो छोरा रियानलाई जन्म दिएकी थिईन । सन... विश्वका ६ धनि अभिनेता । कस्को सम्पती कती ।
सिनेमाको पर्दामा कुनै अभिनेता तथा अभिनेत्रीलाई देखेर हामी उसको वास्तविक जीवनको मुल्याङकन गर्न सक्दैनौ । उनिहरुको जिवन अरु व्यक्तिको भन्दा फरक शैलीमा बितीरहेको हुन्छ ।आफ्नो अभिनयबाट सबैको वाहवाही बटुल्ने यी कलाकारको जीवनमा धन स... आमा बनिन् रानी, के राखिन् सन्तानको नाम ?
मसींर २३, काठमाण्डौ
अभिनेत्री रानी मुखर्जी आमा बनेकी छिन् । उनले मुम्बईको ब्रीज कैंडी हस्पीटलमा छोरी जन्माएकी हुन् । उनीहरुले छोरीको नाम अदिरा राखेका छन् । गत बर्ष मात्रै फिल्म निर्माता आदित्य चोपडासँग विवाह गरेकी रानी, आमा हुँदा निकै खुसी भएकी छिन् ... 1